Home » Creative Writing » စာအုပ်အညွှန်းနှင့် စာရေးသူအား မေးမြန်းခြင်း
Posted by alinsett on Apr 4, 2015 in Creative Writing, Critic, Editor's Choice, History, Literature/Books, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 65 comments
စာရေးသူသို့ မေးမြန်းစူးစမ်း အလင်းဆက် ညွှန်းတဲ့စာအုပ်
ဟုတ်… ။ သတင်းစာထဲ ထည့် ဖို့ ညွှန်းတာက တစ်ပိုင်း…
အစ်မပြုံးဆီက စပ်စပ်စုစု သိချင်မိတာတွေ မေးမြန်းတာက တစ်ပိုင်း…
အစ်မပြုံး…မအားတဲ့ကြားက အလုပ်များအောင်…မေးခွန်းတွေ ထုတ်မိပြီ…
လာဖတ်သွားတဲ့ မမဂျီးကိုလည်း ဇူးဇူးပါ…
.ဘုရား ဘုရား မေးခွန်းတွေက လွယ်တော့မလိုလိုနဲ့ ကြောက်စရာကြီးပါလား။ မေးခွန်းတွေ အသာထား။ အလက်ဇင်းညွှန်းလိုက်မှ ၀တ္ထု က နဂိုကထက်တောင် ပိုကောင်းသွားသေးတယ်။
ငင်​ ငါက သီးသန့်​ အားသွင်းဖို့ မလိုတဲ့ ဘက္ထရီ လို့ ​ပြောမလို့ !
၀မ်းအပွန်း​အေတိုင်း ၀မ်းအပွန်း​အေတိုင်း ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလား ။ ဓာ​သေ​ဒွေ တင်​တာ ကန့်​လန့်​​တွေဖြစ်​​နေလို့ ဒရပ်​လုပ်​ပီး ရပ်​ထားဒယ်​ ။
အခုမှ တွေ့တယ်.. .အဲဒီပိုစ် သိမ်းထားတာ…
ပုံတွေကို အဲဒီနေရာမှာပဲ…. ပြန်တည့်လို့ရတယ်လေ.. ဦးနီ…
.အော်ပြောလို့မှ လုပ်မပေးရင်… လမ်းတွေ့ရင်..အဲ့မော်မော်တွေကို ဂဲနဲ့ထု..
.မေးခွန်း(၃) အခု စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာအမှတ်-၂၁ / စာကြောင်းရေ-၆ မှာ “ရှေးအတီတေ” လို့ သုံးထားတာတွေ့တယ်။ မူရင်း စာသားလေး ထုတ်ပြစေချင်တယ်။
.မေးခွန်း(၉) .နောက်ထပ် မြန်မာဆန်တဲ့ ဘာသာပြန်အရေးအသားလေးတွေ မနည်းတွေ့ရသေးတယ်။ ဥပမာ… စာမျက်နှာ ၅၃၂ အောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ…
… သက်တမ်းရင့် စီရင်စုမြေများကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလာသော စိန့်လောရင့် မြစ်မင်းဧရာသည် အော်လင်းကျွန်းစုများကို ထွေးပွေ့လိုက်ပြီးမှ တဒေါက်စပ်စ်တွင် ကျယ်ဝိုင်းစွာ ခွေရစ်သွားသည်။ ၁၉၃၉ ခု၊ ဆောင်းဦးရာသီ၏ တောဟေဝန်ထဲ မြစ်နဒီစီးဝင်လာရာ ဆောင်းဦး၏ စုံတောပြားဟူသည် အလျှံတညီးညီး ဝင်းပနေခဲ့မြဲ ။ သကြားရွက်တို့က နီတျာတျာ ။ ဒါန်းထင်းရှူးနှင့် ထင်းရှူးပဒေသာတို့ကား စိမ်းရင့်ရွှေပြာ… ။ သစ်ခေါက်ဖြူရော်ရွက်တို့ကား.. ဇမ္ဗူရွှေသို့….
ပြုံးအန်တီရဲ့ အကောင်းဆုံး အားထုတ်ထားရတဲ့အပိုဒ်တွေကို သတိပြုမိပြီး
အဲ့ဒီ စကားလုံး ဖန်တီးမှုကို ဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်ခြင်း အပိုင်းက ကျနော့် အားသာချက်ဆိုရင်
.ဟုတ်ပါ့ လုလုရေ ။ အလင်းဆက် ညွှန်းလိုက်တော့မှ စာအုပ်ပိုကောင်းသွားသလိုပဲ။ တကယ်ပြောတာ။
အညွှန်းကောင်းလို့ ဆိုပေမယ့် အစ်မရဲ့ ဘာသာပြန် စွမ်းရည် က
ဒလောက် နာမည်ပါတပ်ပြီး ဆွဲခေါ်ထားကာမှ…
.မိဂီတို့ နျူးဘာဂိုဏ်းနဲ့ ဆိုင်တာ ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးက လစ်ဗြဲ နဲ့ ကွန်တစ် အားပြိုင်ပွဲ။ လစ်ဗြဲ ရှုံးတယ်။
Winter,Spring, Summer, Autumn ၄ခုသောရာသီ တွေကိုဘယ်လို ဆက်ပြန်မလဲ.. သိချင်..။
. သဂျီးရေ သဂျီး ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ။ မြန်မာစာရေးရတာက လူမျိုး နဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ရှုပ်နေတာဆိုတော့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ လည်း အဲဒါတွေ ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်က ကနေဒါ၊ ကနေဒီယန်။ ဒါပဲ ။ အဲဒါကို မြန်မာပြန်တော့ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ကနေဒီယန်လူမျိုး ပြန်ရမလား၊ ကနေဒါလူမျိုး ပြန်ရမလား မသိဘူး။ ဒါနဲ့ တော်ကြာ ကနေဒီယန် ဖြစ်လိုက်၊ တော်ကြာကနေဒါလူမျိုး ဖြစ်လိုက်။ စာအုပ်နောက်ပိုင်းမှာ စာရိုက်မှားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ကနေဒီယန်ကို စာရိုက်တဲ့လူက မှားပြီး ကနေဒီဖြစ်နေတယ်။ ထုတ်ဝေကာနီး အမှားပြင်ဖို့ ပေးလိုက်သေးတယ်။ သူတို့လည်း ရှုပ်ပြီး မပြင်နိုင်ကြဘူး။ ဒါနဲ့ စာလုံးပေါင်းမှားတွေ ပါပါရော။
မကြာခင် စာအုပ်ကို လက်ကကိုင်ဖတ်ရတန်ကောင်းရဲ့…
(စာအုပ်က အထူကြီးမို့)သယ်ရတာ လေးလို့ဆိုပြီး…မကျန်ခဲ့ပါစေနဲ့လို့…ဆုတောင်းရမယ်..
.ဟုတ်ပါတယ် အန်ကယ်ရေ။ ဒါပေမယ့် မေးတာကနည်းတော့ အားရစရာ သိပ်မရှိပါဘူး။ စာအုပ်က ထူတော့ တော်တော်နဲ့ ဖတ်လို့လည်း ပြီးကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ နယ်ကလူတွေကလည်း ၀ယ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုခေတ်က စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးက အောင်မြင်တဲ့စာအုပ်ဆိုရင်တောင် လွန်ရောကျွံရော အုပ်ရေ တစ်သောင်း လောက်ပဲ ရှိတာ။ လူဦးရေ နဲ့ အချိုး ချကြည့်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်ဘာကောင်မှ မဟုတ်မှန်း သိသွားတော့တာ … ဟီး။
မြီမာပြန် ဖတ်တာတောင် အဲလောက် သီကုံးနေလျင် အင်းဂီလိပ်လို့ စိုလျင် ပေါမနေနဲ့တော့.. ပထမ စာမျက်နှာဂနေ တက်မည် မှုတ်တော့စ်..။
နှစ်ဘ၀ နှစ်ကန္တာကိုဖတ်ချင်နေတာ…။ စာအုပ်ကို မြင်တော့ မြင်လိုက်ပြီး မကြင်လိုက်ရ….။ ဘာသာပြန်ထားပုံတွေကြည့်ပြီး အားကျမိပါတယ်…။
နာ စာအုပ်ထက် နှာစာအုပ်ဆို ပိုကောင်းမဲ ကင်းကောင်ပြာလေး..။ လက်တွေ့ဘွမှာပါ စာအုပ်ထဲကလို မင်းတမီးနဲ့မင်းဓါး လုတ်ကြဇို့..
.ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အမပြန်တဲ့စာအုပ်မို့လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီစာအုပ်မျိုးက တစ်ခုခုကို သင်ယူလိုက်သလိုမျိုးပဲ။ အခုက အရေးအသားအကြောင်းတွေပဲ ပြောနေတယ်။ တကယ်က အတွင်းအနှစ်ကြီးတယ်။ ဘာသာပြန်ချက် ညံ့တယ်ဆိုရင်တောင် နဂိုမူလအကြောင်းရင်းခံက အနှစ်သန္ဓေကြီးနေတယ်။ ဦးနှောက်ကို လမ်းဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးမှ ဖတ်ကြည့်။ လူငယ်တစ်ယောက် ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ တော်ရုံအရည်အချင်းနဲ့ မပေါက်မြောက်ပါဘူး။ ကနေဒါရဲ့ ဂန္ဓ၀င်တန်းကို ၀င်နေတဲ့စာအုပ်ဟာ နှယ်နှယ်ရရလေး ဟုတ်ကိုမဟုတ်စေရဘူး။
.အန်တီရွှေကူမေနှင်းကတော့ ကျမရဲ့ မြင်ဆရာတစ်ပိုင်းပါပဲ။ ခုထိ ဂျာနယ်ထဲမှာ သူ့ဆောင်းပါးဆို မလွတ်တမ်း ဖတ်ဖြစ်နေတာ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့တယ်။ ခုလည်း ခေတ်မီနေတုန်းပဲ။ စိတ်ထဲမှာ ရွစိရွစိဖြစ်နေတာလေး တောင် ရှိတယ်။ တော်ကြာ စိတ်ဆိုးသွားမှာစိုးလို့ မပြောတာ။ ဒီလိုလေ၊ အမေက လစ်ဘရယ်ဖြစ်နေတယ်နော်။ သားကတော့ ကွန်တစ် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လား မသိဘူး။ သားက အမေလောက် မတော်တာ၊
လစ်ဘရယ်တွေ ကွန်တစ်တွေ သိပါဘူးဗျာ
ဘယ်သူ့ထက်တော်ရမယ်လို့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖူးဘူး ၊
အနော်က တွတ်ပီတို့၊ ဦးပြောင်ရှင်းတို့၊ လေးလေးပိုးဇာ၊ ပြာဂလောင် ပြာလချောင် လောက်ပဲ ဥာဏ်မှီတာရယ်… ကိုယ်မမှီတာ ၀င်မဆွေးနွေးတော့ဝူးနော်..
.အချစ်ဝတ္ထု သန့်သန့်လေး တစ်အုပ် ထွက်ဖို့ရှိတယ်။ အဲဒါထွက်ရင် ဝေါင်းကို လက်ဆောင်ပေးမယ် ဟိဟိ။
သင်္ကြန်တရားစခန်းဝင်ခါနီးမို့ စာအုပ်တွေ မဖတ်ရဲသေးဘူး။
မနောက်ပဲ တကယ်ပြောတာဆိုတာ ယုံပါတယ် သဂျီးရယ်။ :p:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်မို့ သံသရာဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်တယ်။
.အမ်၊ တစ်တစ်က ဒီပြန်ရောက်နေတာလား။ ဒါကြောင့်မို့ ရွာထဲ ပျောက်နေပါတယ်လို့၊ ဒီလည်းပြန်ရောက်ကော ရွာထဲ ပျောက်သွားတော့တာပဲ။ သတ္တိကတော့ ကောင်းပါ့။
အစ်​မ​ရေ… အရမ်းဖတ်​ချင်​သွားပြီ… စာအုပ်​ကြိုက်​တဲ့ညီမ​တော်​အတွက်​လည်း
.ခွစ်က အခု ဘယ်မှာနေတာလဲ။ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ခက်မယ်ထင်တယ်။
.လစ်ဗြဲတွေ ရှုံးတယ်။ နောက်တော့ ကွန်ဗေးတွေလည်း ရှုံးသွားတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်က လွှမ်းမိုးအသာစီး ရသွားတယ်။ ဇာတ်သိမ်းမှာ မင်းသား ပေါလ်လေးက အားလုံးကို သဘာဝကျစွာ အနိုင်ရလိုက်တဲ့အပေါ် စာဖတ်ပရိသတ် ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
နောက်တာပါနော်.. ဆရာမ ပြုံး.. ရန်ကုန်ပြန်ရင် ရှာပြီး တစ်က ဖတ်မဲ့ စာရင်းမှာ
ရွာပြန်ရင် ဝယ်ဖို့စာရင်းမှာ မျှစ်ရဲ့ဒီစာအုပ်ကို မှတ်ထားလိုက်ပြီ …
.ခေါင်းအုံးအိပ်လို့လည်း ရပါတယ် ကျောက်စ်ရဲ့။ ၂မျိုး အသုံးဝင်တယ်။ ကလေးထိန်းရင်းဖတ်၊ မောရင် ခေါင်းအုံးအိပ်။
ဆရာမ​ရေ စာအုပ်​က​တော့ မဖတ်​ရ​သေးဘူး ။ ကျ​နော်​က ​ခေါင်းစဉ်​ ​ပေးတာကို စိတ်​၀င်​စား​နေတာ ။ Solitude ဆိုတာ ကျ​နော်​ဆီမှာရှိတဲ့ အဘိဓာန်​​လေးမှာပြန်​ကြည့်​​တော့ (၁) အထီးကျန်​ဖြစ်​ခြင်း (၂) အထီးကျန်​​ဒေသ တဲ့ ။ အဲ့ဒိ​တော့ “Two Solitude ” ကို “နှစ်​ဘ၀ နှစ်​ကန္တာ ” ဆို ​ပေးမိတဲ့ အ​တွေး​လေး သိချင်​သား ။ ကန္တာ ဆိုတဲ့ အသုံးက သိပ်​မရှိဘူး​လေ ။ ကျန်​​တော်​ စဉ်​စားကြည့်​​တော့ “​နွေကန္တာဦး ဆိုတဲ့ အသုံးပဲ စဉ်းစားလို့ရတယ်​ ။
.ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက် မင်းသား နဲ့ မင်းသမီးက ဘ၀ချင်းခြားတယ်။ ခြားတယ်ဆိုတာ ကနေဒါမှာ အင်္ဂလိပ်အနွယ်နဲ့ ပြင်သစ်အနွယ် ဖြစ်နေတယ်။ ဇာတ်ကောင် နှစ်ယောက်စလုံးဟာ တိုင်းပြည်ထဲက အစဉ်အလာတွေရဲ့ ကွပ်ညှပ်မှုကို ခံနေရတယ်။ ဒီခေတ် ကျမတို့ မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေလိုပေါ့။ မလှုပ်သာ မလှည့်သာ။ မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာတွေ။ ဘာသာရေး။ လူမျိုးရေးတွေရဲ့ ကွပ်ညှပ်မှု ကို အရမ်းခံရတယ်။ လူကြီးတွေက လူငယ်တွေပေါ် တက်ထိုင်နေတယ်။ ဘ၀ချင်းခြားပြီး သိပ်ပြီး အထီးကျန်ဆန်တယ်။ အဲဒါကို ကန္တာရ နဲ့တင်စားပြီး ဘ၀နှစ်ခု ကန္တာရ နှစ်ခုလို့ ပြောတာပါ။
ကျနော် စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ရင် ကျနော့်စာအုပ်ကို ဘယ်သူ ညွှန်းပေးမလဲ…. ငင်
.တီမမ သင်္ကြန် တရားစခန်းဝင်ပြီး coc ဆော့မလို့လား။
ပွက်ပွက်မဆူနေတဲ့.. နံနံပင်ရယ်..။ ငရုပ်သီးမှုန့်ရယ်..။ ငန်ပြာရည်ရယ်.။ အကြော်ရယ်..။ နောက်ဆုံး.. ထည့်တဲ့ခွက်..ဇွန်းတွေမှာရှာပါလ်ို့..။
အစား အစာ အကြောင်း ကို ပထမ ပြောရရင် တော့ အပြင် က မုန့်ဟင်းခါး ကိုတော့ မစားရဲ တာ အမှန်ဘဲ။
.ပြောချင်တာတွေ ရင်နဲ့မဆံ့ဖြစ်နေတုန်း မြန်မြန်ချရေးနော်။ မေ့သွားမှာစိုးလို့။ အဓိက အစားအသောက်ပေါ့။ ကျမလည်း ဒီလိုပဲ ထင်တယ်။ မြန်မာတွေ ပိုက်ဆံဖြုန်းတယ်လို့။
I hold myself, and only myself, responsible for getting sick. Knowing it’s unsafe to eat or drink anything outside reliable restaurants or the homes of friends while in Myanmar, I should have been more careful. I’m still not certain exactly where I picked up the infection,
. နေရင်းနေရင်း ပုံမှန် routine ထဲ ပြန်ဝင်သွားရင် မဖတ်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ မပြီးပြီးအောင် အားယူပြီး ဖတ်ခဲ့ပါပြီ ညီမပြုံးရေ။
ဝတ္တုထဲ မပါတဲ့ ချစ်သောဧရာဝတီ အကြောင်း ကို ထင်တာပြောရရင်တော့
ကွကိုယ်တောင် ဘာလဲ ဆိုတာ မမြင်တတ်တော့။
. ပေါလ် လို ခံစားချက် ရနေပြီထင်ရဲ့။ lol:-)))))